Muta otu esi agha ahia maka uru kariri! - Mụọ 2 Trade February 2021
Mụọ 2 Ahịa 2021 Ntuziaka Na Swing Trading!
Zụ ahịa swing na-aghọwanye nke ama ama dịka ụzọ itinye ego maka ndị na-ere ahịa ụlọ ahịa. Nke ahụ bụ n'ihi, n'adịghị ka ahia ụbọchị, ọ na-enyekwu mgbanwe ma na-enye ohere ịzụ ahịa zuru ezu iji wepụta nlọghachi na-agbanwe agbanwe.
Na isi ya, ịzụ ahịa azụmaahịa bụ atụmatụ na-ahụ azụmaahịa mepere emepe ogologo oge karịa otu ụbọchị. Enwere ike imeghe ọnọdụ ahụ maka ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu. N'ọnọdụ ndị na-adịkarịghị, ha nwere ike mepee ya ruo ogologo oge ọnwa 2-3 ma ọ bụrụ na ahia ahụ ka baa uru. Dịka, ilekwasị anya n'ịzụ ahịa bụ iji nweta obere uru n'oge dị mkpirikpi, mana ọ ka ogologo oge karịa otu ụbọchị.
Echiche bụ isi bụ na ọtụtụ ndị ahịa kwenyere na mgbanwe na akụ chọrọ ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụ izu iji nwee mgbanwe na ọnụahịa zuru oke iji nweta uru bara uru. Dị ka ndị dị otú a, mmadụ nwere ike ikwu na ọtụtụ ndị ahịa na-ewere onwe ha dị ka ndị ahịa na-atụgharị ahịa.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a kachasị na ịzụ ahịa ahịa, anyị na-egosi gị ihe niile amaara. Ka ọ na-erule ngwụsị nke ịgụ akwụkwọ ndu anyị n'ụzọ zuru ezu, ị ga-enwe ike ịme mkpebi akọwapụtara ma ahia dị mma ọ bụ maka gị!
Kedu ka Doeszụ ahịa Swing si arụ ọrụ?
Ndị ahịa swing na-achọ ijide "swings" ọ bụla ma ọ bụ mmegharị na ọnụahịa nke akụ na ahịa. Chọrọ igbachi uru gị tupu mgbanwe ọzọ emee, ọkachasị tupu ahịa ahụ adaa ka ọ ghara ime uru gị.
Ndị ahịa swing na-eji ngwaọrụ dịka nyocha teknụzụ iji chọta ohere na swings. Dị ka ị na-achọ otu obere ndiiche, ị nwere ike ịme ụdịrị azụmaahịa a na-ewu ewu ma ọ bụ ahịa siri ike.
Ọ bụrụ na ị na-eche ma ịzụ ahịa ịzụ ahịa nwere ike ịbụ nhọrọ ziri ezi maka gị, lee uru na ọghọm.
Zụ ahịa swing chọrọ obere oge iji tụnyere azụmaahịa ụbọchị
Can nwere ike ijide mgbanwe dị oke mkpa na ọnụ ahịa ego
Nwere ike ịdabere usoro gị na data sitere na nyocha ọrụ aka
Ihe egwu nke ịhapụ ọnọdụ gị ma ọ bụrụ na ijide ogologo oge.
Ahịa ahụ nwere ike ịgbanwe mgbe ọ bụla na-eduga na mfu
Nwere ike ịhapụ usoro ndị na - eme n'oge ogologo oge
Uzo esi aga ahia ahia
Dịka e kwuru na mbụ, ebumnuche onye na-azụ ahịa na-efegharị bụ ịchịkọta uru n'ime obere oge. N'adịghị ka itinye ego na ogologo oge, ị na-achọ ị nweta uru dị ala. N'ọnọdụ ụfọdụ, ị ga - enweta uru nke 5% - 10%.
Obere uru a nwere ike ọ gaghị apụta dị ka nnukwu ụgwọ ọrụ maka onye nkịtị. Agbanyeghị, mgbe ị tụlere oge dị mkpirikpi iji nweta nnukwu uru a, ọ ga-arịgo na mmesapụ aka na nghọta ziri ezi banyere etu ahịa si arụ ọrụ.
Ná nkezi, oge ahịa ahia na-adị n'etiti ụbọchị abụọ ruo ụbọchị iri. Ọ bụ naanị na ọ dịkarịghị na ọ na-eru ọtụtụ izu. N'ime ụbọchị ole na ole a, ị nwere ike ịme obere mmeri iji duga nnukwu uru.
Ọdịiche dị n'etiti Szụ Swing na Dayzụ ahịa Daybọchị
Ihe dị iche n'etiti ụdị azụmaahịa abụọ a dị na oge ijide azụmaahịa ahụ. Na ahia ụbọchị, ị na-ekpebi imechi ahia ahụ n'otu ụbọchị ị mepere ya. N'aka nke ọzọ, ịzụ ahịa ịzụ ahịa na-agụnye ịnọgide na-emeghe ọnọdụ ma ọ dịkarịa ala oge elekere 24.
Ndị na-azụ ahịa swing nwekwara ike ịlele ọnọdụ ha bara uru oge ụfọdụ ma na-agagharị na ya. Ọzọkwa, ọ bụghị iwu na ị ga-agbaso ngwongwo ahụ nke ọma, dịka ọnọdụ ahụ nwere ike ijide ụbọchị.
Nke ahụ abụghị ikpe na ịzụ ahịa ụbọchị. Dị ka ndị ahịa ụbọchị nwere ike ịmepe ahịa maka obere nkeji. Na nke ahụ kwuru, dị ka onye na-ere ahịa na-agba ọsọ, enwere nsogbu ọ bụla na ihe nwere ike ịgbanwe n'otu ntabi anya maka mma ma ọ bụ ka njọ.
Ofdị Akụ nke wingzụ ahịa Swing
Mkpebi mbụ ị na-eme n'ịzụ ahịa bụ ịhọrọ ụdị akụ ịchọrọ ịzụ ahịa. E nwere ahịa ego dị iche iche na ngwa ego maka ndị na-ere ahịa. Na ilele anya, mmadu puru itinye ahia nke mbak, ego, ihe ahia, ya na mkpuchi.
Ndị ahịa nwere ike ịhọrọ ngalaba dabere na ọdịmma ha ma ọ bụ dabere na ego ole ha ga-esi banye ahia ahụ.
N'akụkụ na-enwu gbaa, e nwere ọtụtụ ego iji họrọ - nke anyị na-atụle n'ụzọ zuru ezu n'okpuru.
O doro anya na ngwongwo ndị mmadụ bụ akụ ndị kachasị ewu ewu maka ịzụ ahịa ahịa. Ndị a bụ oke ụlọ ọrụ ọ bụla. Agbanyeghị, azụmaahịa na mbak ndị a na-abịa na ihe egwu nke otu mmemme metụtara uru ngwaahịa ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere oke na akụ nke ụlọ akụ a ma ama, mmepe akụkọ banyere nsogbu mebiri nwere ike ịba uru nke mbak. Dị ka a pụrụ isi kwuo ya, ị na-enwekarị nsogbu dị otú ahụ mgbe ị na-azụ ahịa na ngwaahịa ọ bụla. N'aka nke ọzọ, ha nwekwara ike ịba uru ngwa ngwa na-ebupụta ngwaahịa ọhụrụ.
Indices bụ mbak ụlọ ọrụ n'otu n'otu jikọtara ọnụ. Dingzụ ahịa na indices ga-ahapụ gị ka ị jiri uru nke mgbanwe ahịa nke ọ bụghị naanị otu mpaghara kamakwa ọtụtụ ụlọ ọrụ. N'otu oge ahụ, dị ka equities, mgbanwe na otu ụlọ ọrụ nwere ike imetụta ndepụta ahụ dum.
A na-ahụta ETF dị ka nhọrọ kachasị mma maka akụ maka ịzụ ahịa. Ha na-anọchite anya ọtụtụ akụ dị iche iche ma dị n'ọtụtụ mpaghara.
Onye ahia nwere ike ịhọrọ ETF nke ulo oru mbo obula ma oburu na ha nwere ihe omuma a. Ezụ ahịa ETF na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ itinye ego na ngwaahịa ọ bụla, belụsọ na ị ga-ere otu ụdị akụ dị iche iche.
Forex ma ọ bụ mgbanwe mba ọzọ bụ akụkụ kachasị maka ndị na-ere ahịa. Mgbe ị na-azụ ego, ị na-achọ ịhụ otu ego na-abawanye ma ọ bụ belata uru metụtara onye ọzọ. Na Forex ahịa nwere ike bụrụ ihe na-agbanwe agbanwe ma ọ bụ ndị ahịa na-azụ ahịa na-azụ ahịa.
A na-anwa ahịa ndị ọzọ na-ere ahịa. Ihe ndị a bụ akụ siri ike nke ejikọtara na ngwaahịa ike, ọla, na ngwaahịa ọrụ ugbo. N'adịghị ka akụ ndị ọzọ, ahịa ngwaahịa na-emeghe ma na-arụ ọrụ ụbọchị niile, na azụmaahịa na-aga n'ihu. O si otú a na-eweta nnukwu ihe ize ndụ maka ndị ahịa.
Dingzụ ahịa na cryptocurrencies na-aghọwanye ewu ewu n'etiti ndị ahịa na-agba ọsọ. Iji nweta uru ebe a, ọ bụghị naanị na ị chọrọ nka na azụmaahịa na-agagharị kama ọ dịkwa banyere ọrụ nke cryptocurrencies. Ọnọdụ nke cryptocurrencies na-adọrọ adọrọ nke ukwuu maka ịgbagharị trading azum.
Họrọ Akụnụma Kwesịrị Ekwesị
Maka onye mbido, ọtụtụ nhọrọ dịnụ nwere ike ịmasị ma na-akụkwa otu oge. Ọ bụrụ na ịnweghị ihe ọmụma ọkachamara ọ bụla na otu akụ, ihe mbụ ị ga-eme bụ ịchọpụta ahịa ị ga-arụ nke ọma. A gaghị atụ aro ka ị gbalịa ịzụ ahịa karịa otu ihe onwunwe n'otu oge, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ ubi ọhụrụ.
Ndị na-azụ ahịa swing nwere ọtụtụ ihe onwunwe iji mee nhọrọ dị iche iche gbasara azụmaahịa ha. Dabere na ngwa ọrụ ego ịchọrọ, ị nwere ike irite uru na ngwaọrụ ndị dị na gị. Mgbe ị na-amalite, ebumnuche gị bụ ịmụ ihe jikọrọ otu akụ na otu esi eche echiche mmegharị ya.
Ka ị na-enwe ọganiihu, ị ga-achọ ịzụ ahịa na ngalaba ndị ọzọ. Otú ọ dị, ị ga-enwe a mma echiche gị trading mmasị mgbe ị nwere ihe ahụmahụ.
Ihe Ndabere nke Swing Trading
Zụ ahịa swing na-arụ ọrụ otu ihe dịka ebe ọ bụla na-etinye ego. Isi ihe dị iche, dịka anyị kpuchie, dị na etiti oge nke ọnọdụ ndị ahụ. Nke a bụ ụfọdụ isi ịchọrọ ịma iji bido ịmalite ịzụ ahịa.
Na-aga Long vs. Goga Short
Ọ bụrụ na ị gụọ isiokwu ọ bụla metụtara azụmaahịa, ọ na-esiri ike ịhapụ okwu ndị a. Na isi ahia, enwere uzo abuo. Onye na-etinye ego nwere ike ịga ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ.
Site na ịga ogologo oge, ịzụrụ otu akụ ma nwee olile anya maka uru ọ bara ịrị elu tupu ịre ya.
Site na nkenke, ị na-eche na ọnụahịa ahụ ga-agbadata, yabụ ị na-ere akụ iji zụta ha na ọnụ ala.
Ndị nwere akụ na ụba nwere ike ijikọ ụzọ abụọ ndị a iji mee nke kachasị mma.
Ogologo ahia ahia
Ka anyị kwuo na ị tule na uru ahịa nke ABC mbak na-aga bullish.
Invest itinye ego na 100 mbak ABC na ọnụego ahịa $ 20
Mkpokọta uru nke ahia a bụ $ 2000.
Ọ bụrụ na uru nke ABC mbak gbagoro site na 2.5%, ị ga-enwe ike ree mbak maka $ 20.5, nke ga-enye gị ụzọ ọpụpụ $ 2050.
Uru gị nke $ 50 bụ nsonaazụ nke ịga ogologo oge na ABC. Ọ bụrụ n'ịhọrọ ogologo oge, uru ị ga-enweta ga-abawanye ruo mgbe ebighi ebi. Ọ bụrụ na ọnụahịa nke akụ ahụ arịghị elu dịka ị tụrụ anya ya, mgbe ahụ ị ga-eche ọnwụ ihu na azụmaahịa ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na uru nke ABC mbak ga-agbadata na $ 19.5, mgbe ahụ ị ga-efu na $ 50. Ndị na-ere ahịa siwing na-achọ ịbe akụ tupu ụdị mbelata ahụ na ahịa.
Obere ahia ahia
Ọ bụrụ na mbak ABC na-achọ bearish, mgbe ahụ ị debere ire ere.
Open mepee ahia ire 100 mbak ABC na $ 30 kwa oke, na mkpokọta $ 3000
Ọnụego ABC dara site na 16.6% na ụbọchị ole na ole
Nke a na - ewe ọnụ ahịa ABC rue $ 25
Place na-etinye a Buy iji zụta azụ 100 mbak na $ 2500
Uru gị bụ $ 500
Ego ole ị na-erite na uru ị na-eme site na mkpụmkpụ na-adabere na ego akụ na-ebelata n'ọma ahịa ghere oghe.
Ọ bụghị ndị na-ere ahịa ọ bụla na-agba ndị itinye ego ume itinye aka na ire ere dị mkpụmkpụ. Ọ bụrụ n'ịchọrọ irite uru na usoro ire ere dị mkpirikpi, nzọ gị kachasị mma bụ iji usoro azụmaahịa na-enye CFDs.
Zụ ahịa Swing na CFDs
Mgbe ị na-ere ahịa na CFDs ma ọ bụ nkwekọrịta-maka-Esemokwu, ị na-azụ ahịa na oke. Ihe ọ pụtara bụ na ị nweghị ego a na-akpata (ọ bụrụ ngwa ahịa, ngwaahịa, ma ọ bụ ihe eji eme ya). Kama, ị na-eji ngwa ọgụ dị iche iche akụrụngwa azụ ahịa. Dị ka ndị dị otú a, ị ga-achọpụta ma ị na-enwe obi ụtọ (ịzụta iwu) ma ọ bụ bearish (bearish) banyere atụmanya ya.
N'ụzọ dị oke mkpa, ịzụ ahịa site na CFDs bụ ụzọ dị mma isi eme mkpirikpi mgbe ị na-azụ ahịa. Ka ị ghara ịzụta ma ọ bụ ree akụ anụ ahụ, uru gị ga - abawanye ma ọ bụrụ na ị na - azụ ahịa na oke.
A na-atụgharị ahịa azụmaahịa ka ọ bụrụ obere oge. Agbanyeghị, n'ime obere oge, oge ahụ nwere ike ịbụ ebe ọ bụla n'etiti ụbọchị ole na ole ruo izu ole na ole. Usoro bụ isi bụ ịnakọta uru dị ka ọnụahịa na-abawanye (ma ọ bụ belata ma ọ bụrụ na mkpụmkpụ).
Fọdụ ndị ahịa na-ahọrọ igbachi obere uru, ebe ndị ọzọ na-ahapụ ngwa ahịa ahụ ka ọ wee bulie uru ha nwere. Agbanyeghị, ogologo oge ị na - apụ, ị na - echekwa ihe ndị ọzọ na - emetụta ọnụ ahịa iji wetara gị ọnwụ.
Zụ ahịa swing bụ otu n'ime ọkaibe ka esi abịaru nso ahia n'ịntanetị. O nwere ike iyi ihe dị mfe iji ree akụ ahụ ozugbo ọnụahịa na-abawanye. Agbanyeghị, akụkụ siri ike na-ahọrọ ngwa ọrụ ego kwesịrị ekwesị itinye ego na ya.
Ọ na-ewe oge, ntinye, na ndidi iji kụziere onwe gị nkà nke ịzụ ahịa. Ga-amụ usoro ndị dị ugbu a yana gbalịa ịzụlite ụzọ gị pụrụ iche. E nwekwara ọtụtụ usoro nchịkwa ihe egwu dịnụ iji belata mfu gị.
Ewezuga ọgụ na mgba bụ nsogbu mmụọ nke ị nwere ike ịga ebe ị na-azụ ahịa. O nwere ike iyi na ị na-etinye ego n'ime obere oge, mana ndị ahịa na-agbanye ego na-etinye ego buru ibu n'ọtụtụ akụ iji nweta nnukwu uru. N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị na-eche ọnwụ, nke ahụ nwere ike ịbụ na akụkụ dị mkpa nke ihe.
Ndị na-azụ ahịa kwesịrị ilekwasị anya na izere nsonaazụ nke otu ahia iji metụta ego gị ọzọ. Nke a bụ ebe ngwaọrụ dịka nyocha teknụzụ na-abanye. Ndị a na-enye gị ohere ịchọpụta usoro ma na-eme ihe akụ gị dabara na ya. Ọtụtụ saịtị azụmahịa na-enyekwa gị ohere ịnweta ihe ndị a. Anyị ga-atụle (na echiche anyị) ndị na-ere ahịa kacha mma n'ịntanetị iji na-azụ ahịa na mgbe e mesịrị na ntuziaka a.
Typedị Iwu na Swing Trading
Ruo ugbu a, anyị ekpuchiwo ọnọdụ abụọ kachasị mkpa n'ahịa ọ bụla enyere- ịzụta ịzụta na ire ahịa. Na omenala ịkwụsị, abụọ ndị a iji iche nwere ike ịbụ zuru ezu dị ka obere mgbanwe na ahịa agaghị emetụta ebumnuche uru nke onye ahịa ahụ ogologo oge. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-azụ ahịa nwa oge, ọ gaghị ekwe omume ịhapụ usoro mepere emepe na-enweghị echiche nke oge ị na-achọ inweta. N'ime ime nke a, a ga-akpọ nke a dị ka azụmaahịa aghara aghara.
Dị ka ndị dị otú a, onye ọ bụla na-azụ ahịa chọrọ atụmatụ ụzọ ọpụpụ, ma ọ bụghị ya, ha nwere ike chere na-adịghị agwụ agwụ maka uru ịbawanye ma ọ bụ maka ọghọm belata. Nke a dị ezigbo mkpa, dịka ndị ahịa na-atụgharị ahịa ga-ejikwa ọtụtụ azụmaahịa na obere oge.
Kwụsị-Loss Order amachi Loss
Dị ka aha ahụ na-egosi, usoro a na-enyere gị aka ịkwụsị njedebe gị na ahia. Ọ bụ usoro ị ga - etinye iji mechie azụmaahịa gị ozugbo uru ahịa ruru ọnụahịa a kapịrị ọnụ. Iji maa atụ, ị zụrụ ngwaahịa ABC na $ 50 kwa otu. Mgbe ịzụrụ ihe, ọnụ ahịa nke ngwaahịa ahụ na-ebelata.
Na nke a, itinyela iwu nkwụsị na $ 48. Nke a pụtara, mgbe mbak ABC malitere ịbelata, a ga-ere ngwaahịa gị mgbe ọ ruru akara $ 48. Agbanyeghị etu o siri daba, naanị ị ga-efu $ 2 kwa otu.
Ọtụtụ mgbe, a na-etinye iwu nkwụsị nkwụsị ndị a na ọkwa pasent. Ga-edozi usoro nkwụsị-nkwụsị ma ọ bụrụ na akụnụba tufuo uru ya site na ịsị, 2% ma ọ bụ 3%, ma ọ bụ ọnụego ị họọrọ.
Enwere ike ịdaba na nke a. Agbanyeghị na iwu nkwụsị na-eme dị ka amụma mkpuchi, ọ naghị ekwe nkwa mgbe niile na ị ga-enwe ike ijikwa nke a. Ọnọdụ ahịa nwere ike ghara ikwe ka ire ere ahụ na uru a. Kama nke ahụ, ụfọdụ ndị na-ere ahịa na-enye ndị na-etinye ego ego 'nkwụ ụgwọ-akwụ ụgwọ'. Nke a ga - ahụ na onye na - ere ahịa ga - elekọta usoro ị ga - agbanyeghị ahịa. Iji rite uru na nke a, a ga-ebokwa ndị na-etinye ego ụgwọ ego ọzọ.
Iwu Iburu-Uru ka Mkpọchi-Na Uru
Dika odi nma dika odi ka ogha n’iru ka uru gi rite, onodu oghe n’enweghi ike iguhie na ihe nke sekọnd. Ọ bụ ya mere ndị ahịa nwere ahụmahụ ga-eji leba anya na uru ha. Nanị ihe dị iche ebe a bụ na ebe nkwụsị ọnwụ na-anwa iji mee ka oke mfu ahụ kwụsị, iwu ị na-enweta na-enye gị ohere ịchekwa uru gị. Ndị na-etinye ego na-abata na-akwụ ụgwọ ego mgbe ha nyochachara nyocha ọrụ aka na akụ ahụ. Ọ ga-enye ha atụmatụ ogologo oge ịrịgo nke akụrụngwa ga-apụ.
Iji maa atụ, kwuo na ị gara ogologo oge na ABC mbak $ 50. Place na-etinye iwu maka uru-$ 55. Ọ bụrụ na mgbe ọnụahịa ABC ruru $ 55, a ga-egbu ahịa gị. N'ebe a, ị na-elekwasị anya uru nke 10%. Ntinye-uru ga-eme ka ị hụ na ọbụlagodi na mbak ABC dara mgbe ha ruru $ 55, enwetara ego gị na uru ya kacha mma.
Akpaghị aka gị Trades
Tingtọ iwu dị otú ahụ bụ maka uru nke ọchụnta ego. Ọ ga-enye gị ohere ịlaghachi azụ ma nweta nhọrọ gị tupu ịmalite ịzụ ahịa. Ga-enwetakwa echiche banyere ọghọm ị nwere na uru ọ bụla na azụmaahịa ọ bụla. Ọzọkwa, ịtọ ntọala ndị a ga-akwụsị ndị na-etinye ego na-eche na mkpebi ha ga-eme nke abụọ.
Ndị na-azụ ahịa swịl na-eji ụdị ozi a akwado ihe karịrị otu ahịa. N'ọnọdụ ụfọdụ, akụ gị agaghị erute oke etinyere, ma. Ọ bụrụ na nke ahụ emee, ọ dịịrị onye ahịa ahụ ikpebi ma ha ga-achọ imechi ahịa ahụ ma ọ bụ na ọ chọghị. Na ahia ahia, ị nwere ike ichere ntakịrị ntakịrị iji chere maka mmegharị ọ bụla.
Nwepu ego na oke mgbe ị na-azụ ahịa
Ndị ahịa swing kwesịrị ịnweta nnukwu ego iji nyefee ọtụtụ azụmaahịa n'ime obere oge. Nke a bụ ebe leverage na-abata.
Ndị nwere ego ịdabere na leverage kama iji naanị isi obodo ha. Dịka ọmụmaatụ, ka anyị kwuo na onye ahịa naanị nwere $ 500 na akaụntụ ha, ma ha chọrọ $ 5000 iji hazie azụmaahịa. Ha nwere ike itinye ihe leverage nke 10x iji nweta isi obodo ha chọrọ.
Buru n'uche na itinye ego na-eme ka ọ bụghị naanị isi obodo gị kamakwa uru na ọghọm yana ya. Leverages dị na multi-folds. Dabere na ikike, a ga-enwekwa oke ikike ị nwere ike ịnweta. Ọ ga-adabere na ụdị akụ ị na-azụ ahịa.
Ihe ize ndụ nke nkwụnye ego ahụ bụ n'eziokwu na ọ bụrụ na ị na-eche ọnwụ, ọ ga-abụ 10x dị ka ihe atụ enyere. Maka ndị mbido, ọ dị mkpa na ị maara nke ọma ihe egwu dị n'itinye ego tupu ị gawa iji nweta ohere ịnweta ego ọzọ.
Fegwọ Broker na isslọrụ maka Szụ Ahịa
Zụ ahịa swing na-eme site na ikpo okwu ahia. Taa, ihe ka ọtụtụ n'ime ndị ahịa a na-ewere ọnọdụ n'ịntanetị ka ha na-enye nfe na arụmọrụ. N'agbanyeghị ebe ị na-azụ ahịa, enwere ụgwọ ole na ole ị ga-akwụ onye na-ere ahịa.
The mgbasa akọwapụtara dị ka ihe dị iche na ọnọdụ azụmaahịa nke otu akụ. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ bụ ọdịiche dị n’etiti ego ị na-azụ ma na-ere. Ndị na-ere ahịa na-agbasa mgbasa na azụmaahịa ọ bụla ha na-eme, nke na-ewetara ha uru n'agbanyeghị ụzọ ahịa si agagharị.
Mgbasa na-adịkarị mfe nghọta na usoro pasent. Azụmaahịa ọ bụla i mechara nwere uru ọ dịkarịa ala otu ihe ahụ gbasara mgbasa. Ruo oge ahụ, ị ​​ga-anọgide na-acha uhie uhie.
Nke a bụ ihe atụ nke otu esi agbakọ mgbasa
Kwuo na ị zụtara ABC mbak na nzụta ego nke $ 50.00
ABC mbak na-ọnụ na a na-ere ego nke $ 50.50
Mgbasa, na nke a, bụ 1%,
Iji nweta uru na azụmaahịa a, ịchọrọ ọnụahịa nke ABC iji bulie opekata mpe site na 1% ọzọ iji nweta uru mgbe ịkwụchara mgbasa ahụ
Atụlere yana ụbọchị trading, inggha ahia na-abụkarị uru mgbe ọ na-agbasa. N'ihe banyere nke mbụ, ihe ndị a na-atụ anya dị ntakịrị karịa na ịzụ ahịa na-agba ọsọ, yabụ mgbasa ga-enwe mmetụta dị ukwuu na ikike gị iji nweta uru. Ka o sina dị, ị ka kwesịrị ilekwasị anya na saịtị ịzụ ahịa na-agbasawanye iji were nweta uru dị ka i nwere ike.
Ezie na mgbasa bụ dịtụ a amanyere bụ iwu ego gafee niile trading saịtị, ọ bụghị ọ bụla ore ga-ana gị maka isslọrụ. Ọ bụrụ na ha emee, ọ bụ ego ị na-akwụ maka azụmahịa ọ bụla ị debere na onye na-ere ahịa.
A na-agbakọkwa ọrụ ahụ na pasent, ego ikpeazụ ga-adabere na isi obodo ị na-azụ ahịa. Ga-akwụ ụgwọ ọrụ maka akụkụ abụọ nke azụmahịa ahụ, nke pụtara na a ga-enwe ọrụ ịzụta na ọrụ ire ere.
Nzube ahia ahia ise kacha elu nke 5
Chọta usoro ịzụ ahịa ziri ezi dịkwa oke mkpa dị ka ịmụba ịzụ ahịa n'onwe ya. Ndị mbido na-enwekarị mgbagwoju anya na ọtụtụ narị nhọrọ dịnụ. Ọ bụ ya mere ị ga-eji gbasoro ụkpụrụ, iji chọpụta ma a na-achịkwa ha ma na-enye ụgwọ ezi uche dị na ya.
Ebe ahia kwesiri ntukwasi obi kwesiri inye gi ihe nile di nkpa ka gi mee mkpebi gi. Iji mee ka ọrụ gị dịtụ mfe, n'okpuru anyị ka anyị depụtara (n'echiche anyị) saịtị azụmaahịa ise kachasị mma nke 2021.
1. eToro - Ebe Nlere Azụmaahịa Kachasị Mma Maka Ndị Amalite
eToro nwere ihu ọma dị ukwuu n'etiti ndị na-etinye ego na-achọ ịme ahịa na-agbanwe. Saịtị ahụ dịkwa enyi na ndị ọrụ maka ndị mbido, nwere ọtụtụ akụrụngwa iji mụta azụmaahịa gị. EToro nke UK na nke Australia na FCA na ASIC na-achịkwa. Ikpo okwu a na-enyekwa CFD ahia tinyere nnweta nke narị narị ihe ndị ọzọ - nke na-enye gị nhọrọ zuru oke. Ego nkwụnye ego kacha nta na eToro bụ $ 200.
Iji AvaTrade, ị nwere ike itinye ego na akụrụngwa ego niile anyị tụlere na ntuziaka a. Ndepụta ya gụnyere ebuka, forex, indices, crypto, commodities, na ETFs, yana agbụ na nhọrọ. Uzo a nwere aha di ogologo dika ebe ahia mbu. A na-achịkwa AVATrade gafee kọntinent ise site n'aka ọtụtụ ndị ọchịchị a ma ama.
Zụ ahịa swing chọrọ ọtụtụ omume iji nweta ikike na nkwado. Enweghị ụzọ isi kwuo etu ahia bara uru si dị ma e jiri ya tụnyere ụzọ ndị ọzọ. Ma, ọ bụ ụdị atụmatụ nke nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma maka ụfọdụ ndị na-etinye ego. Ọ ga-adabere na profaịlụ ntinye ego gị, isi ahia ahia dịnụ, yana nke dị oke mkpa - nhọrọ itinye ego.
Ntuziaka a ekpuchiwo isi nke ahia ahia. Tupu ịmalite, ịkwesịrị ịmatakwu ihe ndị ọzọ ị nwere ike ịnweta, yana teknụzụ ịchọrọ iji. Dị ka azụmahịa ndị ọzọ niile na-eru nso, ịkwesịrị ịdị njikere ịnabata ma uru na ọghọm n'ụzọ.
Kedu oge ụdị ahịa ahia na-ere?
Ndị na-ere ahịa siwing na-eme ka ọnọdụ ha meghee maka ụbọchị ole na ole ruo izu ole na ole. Oge a dabere na ụdị akụ na ahịa ahịa.
Ego ole ka ị ga - enweta site na ịgbanye ahịa?
Ndị ahịa swing na-etinye ego iji nweta uru dị ala na obere oge. Nke ahụ kwuru, ego ole mmadụ ga-erite site na otu ụbọchị dabere na isi ahia ha, ọnụọgụ ego ha, yana etu akụ ha si arụ na ahịa.
Gịnị bụ mgbasa na swing trading?
Mgbasa ahụ bụ naanị ọdịiche dị n'agbata ego ahụ na ego ịrịọ nke ngwa ọrụ ego. Mgbe ụfọdụ a na-agụta ya dị ka pacenti, na ndị ọzọ, na 'pips'. Onye na-etinye ego ga-enweta otu pasent na uru naanị iji mebie.
Regunye na-achịkwa ahịa ịzụ ahịa?
Nke a dabere na nhọrọ nke onye na-ere ahịa na ebe ha kpebiri ị nweta ikikere Dịka ọmụmaatụ, na UK nke a bụ FCA, Australia nwere ASIC, na Saịprọs nwere CySEC. Mgbe ị na-ahọrọ usoro ịzụ ahịa, ọ bụ ọrụ gị iji hụ na ndị na-enye ikikere ikikere na-enyocha saịtị ahụ. A na-enye ikikere niile nyiwe anyị kpọtụrụ aha na ibe a.
Kedu leverage dị maka ịgbanye ahịa?
The leverage ókè na siwing ahia kpebisiri ike bụ isi site ore, nakwa dị ka akpan owo klas ..
Kedu ụdị usoro ịkwụ ụgwọ enwere ike iji kwụọ ma wepụ ego na saịtị azụmaahịa?
N'ịzụ ahịa, ndị na-etinye ego na-ejide ọnọdụ ha maka ụbọchị ma ọ bụ izu. N'ụzọ dị iche, ndị ahịa ụbọchị na-emeghe ma na-emechi ọnọdụ n'otu ụbọchị. Ọ bụrụ n’ịchọrọ idobe ọnọdụ gị n’abalị, ịnwere ike ịme nke a site n’ịkwụ ụgwọ ego abali ọ bụla dị ka ebe ahịa azụmaahịa siri kwụọ.